Ahoana ny fomba hanapahana ny fifamoivoizan'ny bilaoginao amin'ny antsasaky | Martech Zone
Talata, Febroary 24, 2009 Alahady, Jolay 27, 2014 Douglas Karr
Tsy manombatombana aho na iza na iza Raha ny marina dia maniry ny hampihena ny fifamoivoizany amin'ny antsasany ao amin'ny bilaogin'izy ireo. Na izany aza, fenitra tsara io miaraka amin'ny statistiko ary manome tsindry kely amin'ny bilaogiko isan'andro.
Raha manohy manao bilaogy amin'ny fototra tsy miova aho dia mitombo ny fifamoivoizako - angamba mpitsidika vaovao 100 isan'andro isan'andro isam-bolana. Na izany aza, raha tsy mitoraka bilaogy iray andro aho dia latsaka antsasaky ny fifamoivoizako. Tamin'ity herinandro lasa ity, sahirana be aho ka ny rohy isan'andro dia ny ankamaroan'ny atiny - na dia ny namako iray namana akaiky aza hitaraina.
Tsy manao bilaogy aho noho ny tsy fahampian'ny atiny, ka mila miverina amin'ny gadona tsara fotsiny aho. Manana fampahalalana an-taonina maro aho hizara ny fandrosoana eo amin'ny teknolojia marketing an-tserasera - mila hifehezana bebe kokoa amin'ny fe-potoana famoahana aho. Mijanona eo, miverina miakatra indray aho!
Tags: fitorahana bilaogyfifamoivoizana amin'ny bilaogybilaogy orinasamandehana fifamoivoizana
Aiza no hanombohana fanombohana?
24 Mey 2009 tamin'ny 2:51 hariva
Tiako ny mangarahara eto. Manontany tena aho hoe ahoana izany raha aseho eo amin'ny pejy foana ny statistika.
Mihevitra aho fa izany dia tsy hiasa afa-tsy amin'ny pejin'ny vokatra sy ireo tranonkala hijerena raha ampitahaina amin'ny bilaogy manokana. Manaraka olona aho noho ny hevitr'izy ireo fa tsy ny statistikan'izy ireo. Fa mahaliana ny mahita raha ny bandy ambony fifamoivoizana no bandy be hevitra.
Mirary soa ho tonga gadona. Tena sahirana aho amin'izany.
24 Mey 2009 tamin'ny 5:26 hariva
Tsara faran'ny faran'ny herinandro any. Inona no nitranga tamin'ny andro nisidinan'ny olona sy famakiana lahatsoratra bilaogy lehibe momba ny marketing 24/7! Te hahita aho raha toa ka mifanaraka io fironana io nandritra ny volana maro lasa.
24 Mey 2009 tamin'ny 8:58 hariva
Mahita zavatra mitovy amin'izany aho. Ny zavatra tokana azoko atao? Mahazoa fandefasana! 🙂
29 Jul 2009 amin'ny 6:32 PM
Hmmm… .. Vaovao tanteraka ity, tianao ny hampihena ny antsasaky ny fifamoivoizana.
Manana bilaogy vaovao aho,
Mila olona maro isan'andro aho,
Raha tsy mampaninona anao ny mamindra ny olona amiko…. :))